Sheekh Xasan Daahir Aways, ayaa markii ugu horraysay muddadii uu u xidhnaa dawladda Soomaaliya shaaca ka qaadaya | Salaan Media
Sheekh Xasan Daahir Aways, ayaa markii ugu horraysay muddadii uu u xidhnaa dawladda Soomaaliya shaaca ka qaadaya
Muqdisho(SM):- Sheekh Xasan Daahir Aways, ayaa markii ugu horraysay muddadii uu u xidhnaa dawladda Soomaaliya shaaca ka qaaday in uu la-dagaallamayo Kooxda Al-Shabaab oo uu sheegay in ay Diinta Islaamka ka been-sheegeen iyo Sidoo kale Ciidammada AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya, sida laga soo xigtay Odayaal Beeshiisa ah oo Xabsiga ku booqday Sheekh Xasan. Xassan Dahir Aweys oo ay la joogeen Odayaal iyo Saraakiil ka tirsan Hay’adda Nabad-sugidda Soomaaliya oo laga filayay in uu ku dhawaaqo go’aan ay ku farxaan Sirdoonka iyo hoggaanka dawladda Soomaaliya, ayaa mar keliya ku dhawaaqay go’aankiisa iyo waxa uu damacsan yahay.
Xasan waxa uu intaa ku daray in aanu dalka ka baxayn, hadday dhacdo in dalka laga dhoofiyana wuxuu ku adkaystay in uu dalka ku soo noqon doono, isla markaana uu dagaal ka dhan ah la geli doono kooxda Al-Shabaab iyo Ciidanka AMISOM oo uu ku tilmaamay gumaysi dalka haysta. ‘’Haddii la i mastaafuriyo oo dal kale la ii dhoofiyo waan ka soo laaban doonaa waxaana ballan ah inaan la dagaallami doono Ciidammada AMISOM ee gudaha Soomaaliya ku sugan iyo Ururka Al-Shabaab oo Shareecada Islaamka ka been-sheegay.” Sidaa ayuu yidhi Sheekh Xasan Daahir Aways, sida ay Warbaahinta Soomaaliya qaarkeed u sheegeen Odayaal goobta uu ku xidhan yahay ku booqday Jimcihii.
Hadalka Xasan Daahir Aways ka soo yeedhay sida Odayaasha laga soo xigtay, ayaa la sheegay inuu si wayn uga cadhaysiiyay madaxda dawladda Soomaaliya, isla markaana meesha ka saaray in uu Sheekh Xasan Daahir Aways ka soo dabcay mawqifkiisa Jihaad-doonka ah ee uu muddada ku jiray.